Hormuud News Friday, April 27th, 2018 | 08:26
[Wednesday, April 19th, 17] :: Baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay saldhigga millitari ee Berbera
Muqdisho (RH) Xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaca ah kulan ay ku yeesheen Muqdisho isku raacay in laga dalbado ra’isalwasaare Xasan Cali Kheyre iyo xukuumadiisu in ay horyimaadaan Baarlamaanka si ay sharaxaad uga bixiyaan heshiiska saldhigga millitari ee Imaaraadka uu ka dhisanayo magaalada Berbera.
Kulanka maanta waxaa shir guddoomiye Afhayeenka baarlamanaka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari laweydiiyey sababta uusan u ogalaan in mooshin laga furo arrinta Heshiiska Berbera, waxaana uu arrintaasi kaga jawabaay guddoomiyuhu inaan dood laga furi karin wax aan faahfaahin laga heyn.
Proj Jawaari ayaa soo jeediyay inaytahay in laga dalbado Ra’isalwasaare Kheyre iyo xukuumadiisa inay faahfaahin ka bixiyaan heshiiska Military ee Berbera, taas ayaana uu isku raacay Baarlamaanku.
Doodda ka dib ayaa xildhibaannada waxey dowladda ku wareejiyeen mooshinkii laga keenay saldhigga si ay faahfaahin uga bixiso eedaha ku qoran.
Arrintan ayaa sidoo kale imaneysa ayada dhowaan wafti uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya ay tageen dalka Imaaraadka Carabta, inkasta oo aan la ogeyn in labada dowlad ay ka wada-hadleen arrintan.
Si kastaba, shirkii dhawaan madaxda Soomaalida ay ku yeesheen Muqdisho loogama hadlin heshiiska saldhigga militari ee Imaaraadka uu ka dhisanayo Berbera iyadoo dad badan ay is lahaayeen warbixin ayaa laga soo saarayaa.